Ingqiqo yesiGrike yokuba nguMntu | Ukuhamba kwe-Absolut
Ingqondo yesiGrike yokuba nguMntu
Ngaphandle kweeyantlukwano ezikhoyo kwezentlalo, amaGrike ayenombono wokuqala we umntu. Kuthathelwa ingqalelo yiyo yonke impucuko yangaphambili isixhobo esilula sentando yoothixo okanye ookumkani, umntu kwifilosofi yamaGrike ufumana ixabiso lomntu ngamnye. Umxholo wobemi, njengelungu ngalinye le-polis, nokuba ungowasebukhosini okanye hayi, esenza elinye lamagalelo aphambili enkcubeko yamaGrike. Inkqubo ye- amapolisa amaGrike Babedibana okanye balwa omnye nomnye, kodwa abantu abangamaGrike baqonda ubuzwe obufanayo, kumanyano lwezinto ezinjengeMidlalo yeOlimpiki, inkolo, ulwimi, phakathi kwabanye.
Kwinkulungwane ye-XNUMX BC, uninzi lwezixeko zedolophu zangena engxakini, kokubini ngenxa yokwehla kwamandla ookumkani, nangenxa yokunqongophala kwemihlaba echumileyo, kunye nokukhula kwenani labantu, okwadala ukungavisisani okukhulu kwezentlalo. Le ngxaki yenze ukuba amaGrike aqokelele IMeditera, yabangela urhwebo olusebenzayo kwaye yandisa ukusetyenziswa kwesiGrike njengolwimi lokuthengisa.
Malunga ne-760 BC, amaGrike amisela iikholoni emazantsi e-Itali, eNaples naseSicily. Ukuthintelwa ngamaFenike kunye nabase-Etruria, babengenakuze balawule onke loo mazwe, kodwa impembelelo yabo yenkcubeko ibonakalise kakhulu ukuvela kwabantu belizwe lase-Italiya.
Emva kobukoloniyali, ubume bezentlalo zepolisi baguqulwa. Abarhwebi abatyebileyo, ngenxa yolwandiso lwaselwandle, bebengafuni ukuqhubeka nokushiya urhulumente ezandleni zesidwangube kwaye bekunye nabanye abalimi bacinezela ukuba bathathe inxaxheba ekuthathweni kwezigqibo. I-Athene, esinye sezona zixeko zichume kakhulu usingasiqithi, emva koko yaqala inkqubo yotshintsho lwezopolitiko, phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX BC, ukuya kwidemokhrasi eqhubela phambili kwizakhiwo zikarhulumente.
Ngo-594 BC umlungisi ogama lingu- Solon uthathe inyathelo lokuqala ngale ndlela, ngokumisela umthetho obhaliweyo, inkundla yezomthetho kunye ne-400 yabameli, abameli abakhethwe ngokobutyebi babo, abaphethe umthetho kwimicimbi yesixeko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ingqondo yesiGrike yokuba nguMntu
U-Shahid Kapoor kunye no-Vivek Oberoi: Abadlali abancinci bamaHindu
IHolo elihle leRoyal Mummies